November 30, 2020 kandai kanda 1
November 17, 2020 kandai kanda 1
November 6, 2020 kandai kanda 1
नेकपा फुट्यो भने प्रचण्डका कारण फुट्छ : मुख्यमन्त्री गुरुङ
November 4, 2020 kandai kanda 1
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच दुरी मात्र बढेको छैन, पार्टी विभाजनको खतरा बढेको नेताहरु बताउँछन् । प्रचण्डले आफूसँग १५ कात्तिकमा भएको भेट, र त्यसपछिका टेलिफोन सम्वादमा प्रधानमन्त्री ओलीले सहमतिमै पार्टी विभाजन गरौं भन्ने […]
भारतीय सेना प्रमुखको भ्रमणलाई दिल्लीमा निकै महत्वका साथ लिइएको छ : अशोक मेहता
November 3, 2020 kandai kanda 1
काठमाडौं । वुधबार भारतका सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणे तीन दिने भ्रमणका लागि नेपाल आउँदैछन् । दुई देशको सम्बन्ध समान्य रहँदाको अवस्थामा भारतीय सेना प्रमुखको भ्रमण एउटा नियमित भ्रमण नै हो । सेना प्रमुखको कार्यभार सम्हालेलगत्तै दुवै देशका सेना प्रमुखले अर्को देशको मानार्थ महारथीको दर्जा लिने लामो समयदेखिको […]
‘खुलामञ्चको भात अशोभनीय, मानिसलाई अल्छी बनायो’
काठमाडौं । लकडाउनेदखि चलिरहेको खुलामञ्चमा खाना खुवाउने अभियानमा रोक लगाएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाको चर्को आलोचना भएको छ । तर, महानगरले भने खुलामञ्चमा खाना खुवाउँदा आफ्नो बेइज्जत भएको तर्क गरेको छ । र, खाना खुवाउने भए पार्टी प्यालेसहरुमा जान भनेको छ । विपन्नहरुलाई खाना खुवाउँदै आएका अभियन्ताहरुलाई काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्देशन […]
‘साउनमा संक्रमित ३९ हजार नाघ्छन्, जोखिम बढेका ठाउँमा कडा लकडाउन हुन्छ’
June 26, 2020 kandai kanda 1
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल अनलाइनखबरसँग कुराकानी सुरु गर्नुअघि स्वास्थ्य तथा मन्त्रालयमा विज्ञहरुसँगको छलफलमा थिए । कडाइका साथ नियन्त्रण गर्दा पनि आगामी साउन अन्तिमसम्म संक्रमितको संख्या ३९ हजार नाघ्ने मन्त्री ढकालले विज्ञहरुको आकलन सुनाए । शुरुमा बढीमा ५ हजार संक्रमित होलान् भन्ने अनुमान गरेर थालिएको […]
नेपालमा कोरोना सं,क्रमणबाट हुने मृ त्युदर कम छ भन्नु अफवाह’
June 8, 2020 kandai kanda 1
सागर बुढाथोकी/ कोभिड–१९ विश्वव्यापी महामारीसँगै यसको वास्तविक सूचनामा पनि महामारी निम्तिएको छ । वैज्ञानिक रुपमा पुष्टि नभएका धारणाहरू सार्वजानिक भएका कारण यसको वास्तविक सूचना पाउन मुस्किल छ । नेपालमा अन्य देशको भन्दा मृत्युदर कम भएको तथा नेपाली वैज्ञानिकले खोप पत्ता लगाएको समेत समाचारहरू आउन थालेका छन् । के हो […]
नक्सामा चु,च्चो थ,प्दैमा त्यो प्राप्त भइहाल्ने होइन – उपेन्द्र यादव
जनता समाजवादी पार्टी नेपालको नाममा एकीकरण घोषणा भएपनि आधिकारिकता पाइनसकेको राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीले सोमबार संयुक्त रूपमा सङ्घीय संसदमा नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक २०७७ दर्ता गरेका छन् । सांसदहरु लक्ष्मणलाल कर्ण र राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले विधेयक संयुक्त रूपमा दर्ता गरेका हन् । दुई दलले संविधानका विभिन्न […]
June 2, 2020 kandai kanda 1
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि भर्खरै बजेट आएको छ । शिक्षामा बजेटले कस्ता कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता दिएको छ ? नयाँ कार्यक्रमहरु केही छन् ? पहिलो कुरा यति ठूलो कोभिड–१९ को महाविपत्तिको बेलामा शिक्षाको बजेट घटेन, बढेरै आएको छ । मैले धन्यवाद दिनुपर्छ । यद्यपि, बढेर आएको बजेटले हाम्रा सबै […]
लिपुलेकको विषयमा भारत र चीन पहिल्यै देखि मिलेका थिए – पूर्व परराष्ट्रमन्त्री महत
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. रामशरण महत लिपुलेक हुँदै भारतले चीनसँगको व्यापार मार्ग खोलेकोमा आ,पत्ति व्यक्त गर्छन् । यो मामलामा पाँच वर्ष अघि नै सम्झौता भएको खुलाउँदै सरकारले कु,टनीतिक दबाब सृजना गरी देशको भूभागमा आँच आउन दिन नहुने बताएका छन् । पूर्व परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका डा. […]
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको गुटगत ल,डाईँमा तल्लो तहसम्मका नेता कार्यकर्ता विभिन्न माध्यमबाट प्र,तिवादमा उ,त्रिन थालेका छन् । केन्द्रमा भएको गुटगत झ,मेलाको असर पार्टीका सबै निकायमा परेको छ । एकले अर्कोलाई आलोचना गर्ने र आफ्नो गुटको पक्षमा ब,चाउ गर्ने काम चलिरहेको छ । नेकपा सांसद नबिना लामाले […]
नेकपाकै नेता भन्छन,- बामदेव गौतम प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा हाँसीमजाक हो
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेल प्रष्ट बोल्छन् । कुरा नचपाइकन बोल्ने उनी हक्की छन् । नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डका निकट नेता पौडेलसँग लामो राजनीतिक अनुभव पनि छन् । पौडेलसँग पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः हिजो बालुवाटारमा भएको सहमतिप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? […]
January 21, 2020 kandai kanda 1
पोखरा । पोखरामा मंगलबारदेखि सुरु भएको ‘मुख्यमन्त्री कप’ फुटबलमा विशेष अतिथिको रुपमा डाकिएका थिए गण्डकी प्रदेशका सांसद दीपक मनाङे । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ प्रमुख अतिथिको रुपमा निम्त्याइएका थिए । मुख्यमन्त्री कप उद्घाटन गर्न आएका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई स्वागत गर्ने तयारीमा थिए सबै । मुख्यमन्त्रीलाई स्वागतको तयारी चलिरहेको बेला […]